सरकारी जागिर छोडेर भैँसीपालन : वार्षिक १० लाख आम्दानी ! – Tufan Media News
सरकारी जागिर छोडेर भैँसीपालन : वार्षिक १० लाख आम्दानी !
७ मंसिर २०७६, शनिबार ०९:०८
जुम्ला – सरर… मोटरसाइकल । मोटरसाइकल चढेर गएका एक जना अधबैँसे व्यक्ति जुम्ला खलङ्गा बजारको भारतीबाडाको सडकमा रोकिनु हुन्छ ।
बिहान झिसमिसेमा पानी र हिलोमा लगाउने बुट, सेतो ट्रयाकसुट र कालो बाक्लो ज्याकेट, पिठ्युँमा ठूलै झोला, झोलाभित्र भरिएका दूधको गेलान तथा बोत्तलहरु छन् ।
ती व्यक्तिको मोटरसाइकलको वरिपरि पनि दूधले भरिभराउ बोतलहरु हुन्छन् । एकै छिनमा मोटरसाइकलबाट उहाँ झर्नुहुन्छ र झोलाबाट दूध निकाल्नु हुन्छ । एकाबिहानै जुम्ला गुठीचौर गाउँपालिका-५ धिताल गाउँनिवासी विष्णु धिताल ३० देखि ४० लिटर दूध बोकेर जुम्ला सदरमुकाम हानिनु हुन्छ ।
गाउँबाट बिहान ५ बजे मोटरसाइकलमा दूध बोकेर जुम्ला बजारमा बेच्न निस्कनु उहाँको दैनिकी हो । धितालको घरसम्म पुग्न सदरमुकामबाट दुई घण्टा हिँड्नुपर्छ । त्यहाँ किसान धितालले जिल्लाकै नमुना ‘अब्बल भैँसीपालन’ व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनु भएको छ । एक दशकदेखि सञ्चालन गरेको उहाँको भैँसीपालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ ।
विक्रम संवत २०६२ सालमा गरिबी निवारण कार्यक्रमबाट १६ हजार ऋण लिएर भैँसीपालन सुरु गर्नुभएका धितालसँग अहिले झण्डै १२ लाख रुपैयाँ बढीका भैँसी छन् । अहिले उहाँसँग ११ वटा दुहुना भैँसी छन् । ११ वटा भैँसीबाट दैनिक ३० देखि ५० लिटर दूध दिने गरेको धितालले बताउनुभयो ।
३४ लाख आठ हजार दुई सय २६ रुपैयाँको लगानीमध्ये १७ लाख ५५ हजार ३३ रुपैयाँ भेटनरी तथा पशु सेवा कार्यालयले सहयोग तथा आधा आफ्नो लगानीमा धितालले भैँसी बस्ने आधुनिक गोठ, घाँस राख्ने छत, पिसाब संकलन ट्यांकी, पानी ट्यांकी, दूध राख्ने डीपफ्रिज, दाना खुवाउने डेक्ची, घासँ काट्ने मेशिनसहितको पूर्वाधार आफ्नै घरमा बनाउनु भएको छ ।
विदेश बाट पैसा पठाउँदै
धेरैलाई पर्ने आईपीओ आँउदै,